Betas amin'ny dropper, amin'ity indray mitoraka ity dia ny beta 4 amin'ny watchOS 8.1 | Vaovao iPhone
Betas amin'ny dropper, amin'ity indray mitoraka ity dia ny watchOS 4 beta 8.1
Apple dia namoaka beta 4 ho an'ny mpamorona ny watchOS 8.1 ora vitsy lasa izay. Amin'ity dikan-teny vaovao ity izay atolotra amin'ny ankapobeny dia fanamboarana bug hita tamin'ny dikan-teny teo aloha sy fanatsarana ny fahamarinan-toerana ny rafitra mihitsy. Amin'ireto dikan-teny beta ireto ho an'ny mpamorona navoaka tao anatin'ny ora farany, ny tian'i Apple dia ny hitazonana ny fitoniana ambony indrindra ao anatin'izy ireo mba hahafahana manomboka ny dikan-teny farany ao anatin'ny fotoana fohy. Ireo dikan-teny farany ho an'ny mpampiasa rehetra dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny volana Janoary.
Izaho manokana dia tsy mpampiasa mampiasa dikan-teny beta amin'ny fitaovana ivelan'ny navoaka ho an'ny Mac, mametraka azy ireo foana aho fa amin'ny kapila ivelany mba hisorohana ny olana. Ny safidy hametrahana ireo beta vaovao ireo dia tsy maka fanahy ahy loatra noho ireo endri-javatra vaovao ampiany, toa tsy misy fiovana be loatra ary izany no mahatonga ahy hahita tsara kokoa ny miandry ny dikan-teny farany. Na izany na tsy izany, ireo rehetra efa manana ny dikan-beta teo aloha napetraka ao amin'ny Apple Watch dia tsy maintsy manao izany fanavaozana avy amin'ny safidin'ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny OTA ary voila, efa manana beta 4 napetraka izy ireo.
Ny zavatra tsy maintsy hazavaintsika dia ny miaraka amin'ireo kinova beta an'ny Apple Watch, tokony hitandrina tsara isika satria misy olana ao aminy afaka mamela ny famantaranandrontsika tsy miasa intsony. Ny zavatra lojika dia tsy nisy izany nanomboka teo efa niaraka tamin'ny kinova beta ampahibemaso efa ela isika na dia tamin'ny fiambenana aza ary toa mandeha tsara izany, saingy tadidio fa ny betas dia kinova fitsapana ary tsy afaka miasa 100% foana izy ireo na amin'ny asany na amin'ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Betas amin'ny dropper, amin'ity indray mitoraka ity dia ny watchOS 4 beta 8.1
Ireo no lalao sy fampiharana tsara indrindra tamin'ny 2021 nomen'ny Apple App Store Awards
Jabra Elite 3, ny mpanjakan'ny headphone ambanin'ny € 100